13 Antony mahatonga ny olona tsy mihaino anao - Fifandraisana
Mety hampihoron-koditra ny fahatsapana fa tsy raharahiana ianao, na hoe tsy miraharaha ny hevitrao.
Manomboka mino ny eritreritrao ianao tsy mendrika . Manontany tena ianao raha tena liana amin'ny zavatra lazainao ny olona manodidina anao.
Ny vintana dia tsy ny lazainao fa ny fomba filazanao azy io mety hahatonga ny olona hivoaka.
Nahazo fomba fijery tsara momba ny zavatra mety tsy mety nataonao izahay, ary ny fomba fanitsiana izany…
1. Tsy mihaino azy ireo ianao
Làlana roa tonta ny resaka, sa tsy izany? Raha ianao irery no miteny dia manjary monologue eo imason'ny mpihaino tsy miasa. Ary tsy misy mankafy resaka amin'ny olona iray izay mijery fotsiny ny tenany.
Ny iray amin'ireo antony mety tsy fihainoan'ny olona anao dia satria tsy mihaino azy ireo ianao. Angamba fahazarana efa nahazatra anao ny manakana azy ireo tsy hiresaka aminao. Angamba zavatra ataonao amin'ny resadresaka manokana izay nahatonga ilay olon-kafa tsy nihaino intsony.
Na izany na tsy izany, alao antoka fa mitaky firesaka ny fifandraisanao SY nihaino . Valio izay lazain'ilay olon-kafa ary mety hahazo izy ireo, ary hijanona, handray anjara. Ataovy mahasoa ny fifampiresahana ary ampifandraiso izy ireo.
2. Tsy tena te hohenoina ianao
Matetika isika dia mieritreritra fa te-hiresaka ary avy eo ho sosotra rehefa tsy dia mifantoka amintsika loatra ny olona.
Na izany aza, mila mianatra mandinika ny tenantsika sy ny fomba fampisehoantsika izay lazaintsika isika.
Mety hoe manalavitra ny famoahana ny hevitrao ianao, ary miteny mangina loatra na manarona ny vavanao.
Indraindray, manahy ny amin'ny firesahana imasom-bahoaka isika ary milaza amin'ny tenantsika fa tsy mihaino antsika ny olona. Tokony hanaiky kosa isika fa tsy mahay mifandray amin'ny toe-javatra sasany.
Ara-dalàna tanteraka io ary mila fotoana sy fanazaran-tena fotsiny vao tafavoaka. Miezaha manery anao amin'ny toe-javatra mila miresaka amin'ny olon-kafa ary hitombo ny fahatokisanao tsy ho ela.
Tsy ho ela dia ho dodona ny handre izay holazainao ny olona satria maniry mafy ianao dia ataovy hoe: io! Raha mampiasa vola amin'ny zavatra lazainao ianao dia ho tian'ny olona ho fantatra ny antony - ary hanomboka hihaino izy ireo.
3. Tsy azonao antoka ny zavatra ezahinao holazaina
Ity dia mampifandray amin'ilay teboka etsy ambony ary matetika dia tonga amin'ny tsy fandriampahalemana.
Mety hanana famerenana lahateny tonga lafatra ianao, saingy mihamangatsiaka ianao rehefa manandrana tena manolotra azy. Izany dia mahatonga anao hahatsapa ho toy ny tsy fantatrao izay ezahinao holazaina ary manasaro-javatra anao kokoa.
Ny fanazavana hafa dia ny fahatsapanao fa mila manome zavatra ianao, na dia tsy misy zavatra tena tianao holazaina aza. Te hiteny ianao ary hohenoina saika noho ny aminy, ka tsy manana teboka mazava holazaina.
Raha manomboka manaisotra doka amin'ny lohahevitra tsy fantatrao ianao, dia mety hihena ny feonao ary tsy handresy lahatra. Hanomboka hamono ny olona. Omano ny tenanao ary alao antoka fa misy antony rehefa miteny ianao.
4. Tsy miteny mazava ianao
Averina indray, ity dia mampifandray amin'ny faniriana hiteny zavatra ho azy. Raha tsy azonao antoka ny zavatra ezahinao holazaina, ny ankamaroan'ny olona dia hiaritra mandritra ny fotoana fohy mandritra ny fiezanao handamina ny teninao.
Raha mijaly amin'ny stutter ianao dia olana hafa tanteraka izany ary hangoraka kokoa ny olona.
Raha misavoritaka sy tsy mirindra ianao dia hahazo fe-potoana fahasoavana fohy izay hiheveran'ny olona hoe 'Oh, mitaintaina izy ireo, andao hiaritra amin'izy ireo.' Avy eo dia hanomboka hihetsika ny sain'izy ireo.
Mety ho henjana izany, saingy avereno ny toe-javatra - ohatrinona no hojerenao ny olona mikorakoraka sy mimonomonona momba ny foto-kevitra mazava?
5. Tsy ilaina izany
Clichéd, azo antoka, fa fohy ny fiainana. Amin'ny toe-javatra sasany dia mila fampahalalana haingana fotsiny isika. Tianay holazaina amintsika izay tiana ho fantatra, ary tsy te handre zavatra hafa isika.
Raha manontany ny lehibenao hoe rahoviana no ho vita ny tetik'asa iray, dia lazao azy ireo. Ataovy izay hahalalana azy. Hitsahatra tsy hihaino izy ireo raha manomboka miresaka momba ny faran'ny herinandro na ny fivezivezena ianao.
Tsy noho izy ireo tsy liana amin'ny fiainanao, fa satria tsy misy dikany amin'izao fotoana izao. Ny toe-javatra sasany dia mitaky fampahalalana haingana sy marina tsy misy fluff.
Tandremo izay takiana ary atolory. Tehirizo ny resaka an-tsokosoko raha miala sasatra ny kafe raha tsy maninona miresaka zavatra mahaliana fa tsy misy ifandraisany!
6. Mamerina ny tenanao ianao
Mijanona tsy mihaino intsony ny olona raha vao henony ilay zavatra mitovy imbetsaka, indrindra raha amin'ny resaka iray ihany.
Indraindray ianao dia tsy mahita intsony hoe iza no noteneninao, fa mety hanjary somary mahasosotra raha toa ilay olona iray ihany no milaza aminao ny ‘vaovao’ mitovy hatrany hatrany. Tsy midika izany hoe tsy te handre izay holazainao ny olona, ​​midika fotsiny izany fa tsy te handre azy imbetsaka.
Tsy mila manomboka mitazona ny lohan'ny olona ilazanao ny tantara tsirairay ianao, fa manandrama mamaky ny efitrano. Raha misy olona manao zona, miezaha mahatadidy raha efa nikasika an'io teboka io ianao ary ampifanaraho amin'ny lohahevitra hafa izy ireo.
Ahoana no fomba hitenenana mazava kokoa, atsaharo ny mimonomonona, ary hohenoina voalohany
Ahoana no fanoratana sy fanomezana lahateny manentana fanahy sy manentana
7. Tsy eo amin'ny fomba fisainana mety izy ireo
Ity lisitra ity dia nifantoka tamin'ny zavatra ataonao hatreto, saingy zava-dehibe ny tsy andraisana izany rehetra ny tsiny! Misy lafin-javatra sasany ivelan'ny fifehezana anao izay mety hahatonga ny olona tsy hihaino anao.
Miezaha mandanjalanja zavatra ary ampahatsiahivo fa ny fitondran-tenan'ny hafa matetika dia tsy misy ifandraisany aminao. Mety tsy ilay toetranao ilay olona iresahanao fotsiny. Tadidio fa mahatsapa izany ianao indraindray ary manandrana tsy mandray azy manokana.
Ny antony mety tsy fihainoan'ny olona anao dia satria variana loatra ao an-tsainy izy ireo mba tsy hihaino. Miezaha mafy mba hamaky ny fitenin-tenan'izy ireo ary hamarana ny resaka raha tsapanao fa tsy izao ny fotoana mety.
8. Tsy eo amin'ny fomba fisainana mety ianao
Manome fihodinana bebe kokoa noho ny tsapantsika isika, ary afaka mirona haingana amin'ny toetrantsika ny olon-kafa. Raha tsapanao fa tsy mihaino anao ny olona, ​​mety ho tsy sendra anao toa tsy te hiteny ianao.
Raha manome vibe hafahafa ianao dia mety tsy hahatsapa ny olona hoe tokony hanao resadresaka aminao izy ireo, na mety handao anao amin'ny resaka anaty vondrona.
Avereno ny toe-javatra - raha toa nisy olona somary ‘tsy teo’ dia mety hieritreritra ianao fa rariny kokoa ny tsy miresaka amin'izy ireo toy izay manery ny resaka. Tsy ianao no diso fa zavatra tokony ho fantatra fotsiny.
9. Ianao no mitarika ratsy amin'izany
Ny fomba hanombohanao resaka dia tena zava-dehibe - mamela ny olon-kafa handrefy ny toe-javatra izany.
Miankina amin'ny fitenin'ny vatanao sy ny feonao io toy ny momba ny zavatra lazainao ihany. Raha manomboka fehezanteny ratsy ianao dia tsy te hihaino ny olona sasany.
Toy izany koa, raha tena miabo amin'ny toe-javatra iray ianao izay mahatsapa fahakiviana na sosotra ny olon-drehetra dia mety tsy mety izany.
Ny firesahana momba ny olona na zavatra iray dia mety tokony hataonao, fa alao antoka fa manamboatra azy amin'ny fomba tsara hanombohana azy ianao. Ny fidirana amin'ny resaka sy tsy fahalalam-pomba eo no ho eo dia tsy hampiditra ilay olona iresahanao!
Eritrereto ny fomba fananganana ny resaka ary ataovy izay fara herinao mba hangorahana sy hifanaraka.
inona no ataon'ny olona rehefa mankaleo eo
10. Notapahinareo izy ireo
Meloka isika rehetra amin'ny fanelingelenana ny hafa indraindray, ary fantatsika rehetra fa mahasosotra izany rehefa misy manelingelina anao amin'ny fivezivezena.
Mety tsy tsapanao akory hoe manao an'io ianao, fa mety manelingelina olona hafa loatra ka tsy te hijery intsony izay lazainao.
Raha matetika ianao no manapaka ny fehezanteny antonony dia mety hahatsiaro tena ho ambany sy tsy liana izy ireo. Araka izany dia tsy dia miraharaha izay lazainao izy ireo ary tsy hanome lanja azy ireo.
Tadidio ihany koa fa ny resaka dia lalana roa làlana ary ilaina ny fifanajana mba hahatsapan'ny rehetra fa voadinika sy manan-danja izy rehetra.
11. Miala tsiny ianao fa tsy misy antony
Mahay miala tsiny dia tsara. Miteny miala tsiny fa tsy misy antony? Tsy misy ifandraisany sy mahasosotra kely.
Raha mamaky an'ity ianao ary mahatsiaro tena ho meloka , afaka miteny soa aman-tsara ianao fa manao an'io! Tsy natao hahatonga anao hahatsapa ho ratsy amin'ny tenanao izany, fa hanazava ny fihetsika sasany mety anananao.
Amin'ny alàlan'ny fialantsiny amin'ny fialan-tsasatrao dia manala baraka ny tenanao ianao ary ho tonga haingana amin'izany ny olona. Amin'ny filazanao hoe miala tsiny fa manana hevitra ianao, dia tsy hanome lanja firy azy ny olona. Raha ratsy loatra ka mila miala tsiny, inona no ho azon'izy ireo amin'ny fihainoana?
Fahazarana sarotra ny miala, fa ho tonga eo ianao. Matetika izany dia miaraka amin'ny fahatokisan-tena, koa miezaha mafy mba hametraka ny tenanao amin'ny toe-javatra hiresahanao amin'ny olona.
Rehefa mandeha ny fotoana dia ho tsapanao fa olona Aza miraharaha izay lazainao. Manomboha mametraka lanja bebe kokoa amin'ny eritreritrao satria, tsy vitan'ny maha-zava-dehibe azy ireo, fa tsy manam-paharoa izy ireo.
inona ny fetra mahasalama amin'ny fifandraisana
12. Mivadika ho resadresa-poana ianao
Misy fotoana sy toerana hanaovana fifosana, aleo tsorina. Tsy ny fitondran-tena mahasalama indrindra, fa indraindray ianao mila whinge kely momba ny olona iray avy any am-piasana na ny sakaizanao vaovao. Ny fotoana sy toerana hanaovana an'ity dia mety tsy any am-piasana na amin'ny toe-javatra matotra!
Ny firesahana malalaka dia zavatra ataontsika rehefa mahazo aina isika, ka izany no mahatonga antsika mirona hanao an'izany amin'ny fianakaviana sy namana akaiky . Raha misy ny fifankahazoana eo aminao sy ilay olona iresahanao dia tohizo.
Raha tsy fantatrao tsara ny olona iray dia tsy mety ny manomboka resadresaka momba ny fisehoan'ny olona na mpiara-miombon'antoka aminao. Hantsoina haingana ianao ho toy ny fifosana ary hitsahatra tsy hihaino anao ny olona.
Ny fifosana dia hita amin'ny fomba ratsy ary manjary very lanja ara-tsosialy, satria tsy misy olona te-hiaraka amin'ny olona manao ratsy ny olon-kafa. Averina indray - ny fotoana sy ny toerana!
Azontsika rehetra atao Google ny zavatra haingana ary manala ilay zavatra voalohany miseho. Wikipedia dia nanjary loharanom-pahalalana ho antsika, izay tsara tanteraka amin'ny ankamaroan'ny fotoana.
Raha mampiasa azy ianao hanehoana fa tena manam-pahalalana momba zavatra ianao, dia azo inoana fa hiseho haingana be ianao.
Betsaka amintsika no hanaiky fa nanamarina ny zava-misy nifampiresahana marani-tsaina ary mahafantatra ara-tsosialy. Alao antoka fa manao izany amin'ny toe-javatra mety ianao!
Ny fidirana amin'ny resadresaka lalina sy matotra amin'ny lehibenao momba ny fizika kuantum rehefa tsy afaka manonona ny andalana voalohany amin'ny fidirana Wikipedia ianao dia hahatonga anao ho hadalana, haingana dia haingana.
Mety ho iray amin'ireo antony mahatonga ny olona tsy hihaino anao intsony izany. Mahaliana ny mandray anjara amin'ny resadresaka, fa tsy misy olona te-handre olona iray mivezivezy amin'ny alàlan'ny iray.
Mialà kely ary tadidio fa tsy maninona ny tsy fahalalana ny zava-drehetra momba ny zava-drehetra. Mankahala ny olona ny ‘ fantatry ny rehetra ‘Na izany aza, ka tsara ho ilay olona mianatra zava-baovao.
Hifantoka bebe kokoa aminao ny olona ary hanaja anao kokoa, raha miteny fotsiny ianao hoe 'Tsy dia fantatro loatra izany, raha ny marina. Lazao amiko bebe kokoa? ” Tsotra!
Fantatray fa ity lisitra ity dia mety toa manasongadina betsaka anao sy ny toetranao. Ary isika dia.
Tsy hoe satria tokony handray ny tsiny rehetra ianao na hahatsiaro tena ho meloka, fa satria, matetika ianao dia mitazona ny fahefana hanova zavatra.
Mora ny mipetraka ary mamela ny zavatra hitranga amintsika indraindray. Ny fahatsapana fa tsy ankasitrahana na tsy miraharaha antsika dia mety hahatonga antsika ho kivy sy tsy afa-manoatra.
Izany no antony nifantohanay tamin'ny fomba ahafahanao manitsy ny fihetsikao mba hahazoanao valiny hafa amin'ireo manodidina anao.
Azo antoka fa mila asa izy io, fa ho sarobidy daholo amin'ny farany! Tsy ny olona ihany no handinika anao bebe kokoa, fa hahatsapa ho matoky tena kokoa ianao ary mahavita azy eo amin'ny fiainana.
fomba hanehoana fitiavana ny sakaizanao
mendrika ny hilaza amin'ny olona ny zavatra tsapanao ve
ny toetran'ny maherifo dia voafaritry ny
manao fitiavana ilay tianao
ny vatolampy vs olombelona no nialako
mandra-pahoviana i shane sy ryland no mampiaraka